मनोरञ्जन – Page 939 – Etajakhabar
‘केटी जस्तै छ’ भन्नेलाई अनमोलको कडा जवाफ (भिडियो सहित)
ताजाखबर। चर्चित युवास्टार नायक अनमोल केसी आफ्नै ब्यानरमा आमाले बनाएको चलचित्र 'म त तिम्रै हुँ'को प्रेस मिटमा देखिए । उनि साथ र सहयोग गर्ने सबैलाई धन्यवाद दिन कार्यक्रममा पुगेका थिए । त्यहाँ उनलाई धेरै प्रश्न गरियो त्यो मध्ये एक थियो, 'तपाईँलाई केटी जस्तो छ भन्नेलाई के भन्नुहुन्छ?' यो प्रश्नमा उनले निकै कडा जवाफ दिएका छन् । उनले के जवाफ दिए त ? भिडियोमा हेर्नुहोस्:
‘ड्राईभर दाई’को गीत रिलीज (भिडियो)
ताजाखबर। बीजी फिल्मस् प्रालीको व्यानरमा बनेको नेपाली चलचित्र 'ड्राईभर दाई'को गीत रिलीज भएको छ । रबि अधिकारीका शब्द रहेको सार्वजनिक गीतमा टंक बुढाथोकीको संगीत छ भने स्वर टंक र सरु गौतमको रहेको छ । भाद्र ३१ गतेबाट नेपालभर एकसाथ रिलिज हुने यो चलचित्रमा किशोरसँगै सीमा केसी, प्रज्जवल गिरी, दिनेश शर्मा, ध्रुव कोइराला, घनश्याम गिरी, राजेन्द्र गौतमलगायतका कलाकारको मुख्य भूमिका छ । राजेन्द्र गौतम र ज...
के सलमानले १८ नोभेम्वरमा बिहे गर्छन् ?
ताजाखबर। बलीउडका सुल्तान सलमान खान हालै सानिया मिर्जाको पुस्तक 'Ace Against Odds'को रिलीज कार्यक्रममा पुगेका थिए । सलमान जहाँ त्यहाँ उनको बिहे प्रसंग त पक्कै आउँछ । यसैपनि यो बर्ष सलमान र यूलियाको बिहे चर्चा रफ्तारमा छ । एउटा यस्तो संयोग छ, सलमानका माता-पिता र बहिनी अर्पिताको बिहे नोभेम्वर १८ मा नै भएको थियो । यसै सन्दर्भमा सलमानसँग पनि यो प्रश्न सोधियो कि, 'के उनले नोभेम्वर १८' मा बिहे गर्...
गिनिज् बुकमा नाम लेख्न एकै दृश्य खिचेर दुई चलचित्र बनाउने तयारी
काठमाडौँ, ३ साउन । एउटै दृश्य (वान सट)मा खिचिएका दुई नेपाली चलचित्र ‘जालो’ र ‘जालो रिटन्र्स’ एकैसाथ तयार हुने भएका छन् । विश्वमै पहिलो पटक यो किसिमले चलचित्र बन्न लागेको हुनाले यस कार्यलाई ‘गिनिज बुक अफ वल्र्ड रेकर्ड’मा दर्ता गर्न लागिएको आज यहाँ आयोजित कार्यक्रममा जानकारी दिइयो । सङ्गीतकर्मीद्वय अराज केशव र मोहित मुनालले बनाउन लागेको चलचित्रमा करिब ५० कलाकारले अभिनय गर्नेछन् । अराज केशवको...
रजनीकांतको जादु, दुई घण्टामा ‘क‍बाली’का सबै टिकट बुक
ताजाखबर। सुपरस्टार रजनीकांतको फिल्म 'कबाली'ले रिलीज अगावै फ्यानलाई खुशीको खबर दिएको छ । २२ जुलाईमा रिलीज हुने यो फिल्मको प्री-बुकिंगमा अमेरिकामा दुई घण्टामा नै सबै टिकट बुकिङ् भएको छ । यो फिल्म यस बर्षको प्रतिक्षित फिल्म हो । रजनीको ४० बर्षे करियरमा यो १५९ औँ फिल्म हो । अमेरिकामा यो फिल्मलाई ४०० पर्दामा रिलीज गरिनेछ ।
गायक तथा संगीतकार राम बहादुर बाँडेका तीन एल्बम एकसाथ रिलीज
ताजाखबर। आइतवार राजधानीमा एकसाथ तीन म्यूजिक एल्बम रिलीज गरिएको छ । नयाँ शक्ति नेपालका नेता देवेन्द्र पौडेलको प्रमूख आतिथ्यतामा गायक, संगीतकार तथा रचनाकार राम बहादुर बाडेका एल्बमहरु सार्वजनिक गरिएको हो । नेपाली आधुनिक गीति संग्रह 'नसोचेको भाग -२', भजन माला १ (नेपाल भाषा) र भजन माला १ (नेपाली भाषा) गरि तीन एल्बम सार्वजनिक भएका हुन् । त्यस्तै, 'नसोचेको भाग -२'मा संग्रहित दुई गीतका भिडियो पनि स...
हत्या अघि कन्दिलका भाईले फेसबुक र भिडियोबाट धम्की दिएको रहस्य सार्वजनिक
एजेन्सी। पाकिस्तानी कन्ट्रोभर्शियल मोडल कन्दिल बलोचको बलात्कार पछि हत्या गरिएको लगायतका समाचारहरु आइरहेका बेला प्रहरीले घटनाबारे थप रहस्य सार्वजनिक गर्दै गइरहेको छ । मोडल कन्दिल बलोचको मुल्तानमा उनकै ३० वर्षे भाई वसीमले गोली हानेर हत्या गरिएको भनिए पनि पछि घाँटी थिचेर हत्या गरेको भन्ने समाचार पनि बाहिरिएका छन् । पाकिस्तान प्रहरीले उनका परिवारका सदस्यलाई हिरासतमा राखेर थालेको अनुसनन्धानबा...
क्याटरिनाले फेसबुक पेज खोलेको २ दिनमै कटे ४२ लाख फलोअर्स
एजेन्सी । नायिका कट्रिना कैफले ३३ वर्ष पुगकेको अवसरमा उनले फेसबकु पेज पनि सुरु गरेकी छिन् । उनलाई फेसबुकमा बलिउडका २ चर्चित नायक सलमान खान र साहरुख खानले स्वागत गरेका छन् । नायिका कैफले पेज सुरु गरेको२ दिन नवित्दै पेजमा लाइक गर्नेको संख्या ४२ लाख पुगिसकेको छ । उनका फलोअर्स ह्वात्तै बढेको देखेर उनी ३ छक्क परेकी छिन् ।
बरुण मलाई किस गरि राखन प्लिज : नायिका परिणिती चोपडा
एजेन्सी । नायिका परिणिती चोपडाले नायक बरुण धवनलाई चलचित्रको स्क्रिप्टमा नै नभएको कथा बनाएर लामो समय चुम्बन गरेको दृश्यले यतिबेला बलीउड तात्तीएको छ । प्रसंग हो चलचित्र ‘ढिस्यूम’को । जसमा समावेश एक गीतमा नायक बरुण धवनसँग रोमान्स गरेकी यि नायिकाले नायकको सल्लाहमा नै भनिन् बरुण मलाई लामो समय किस गरीराखन प्लिज । स्रोतका अनुसार चलचित्रमा चुम्बन गर्ने आइडिया बरुणकै थियो । उनले परिणतीसँग चुम्बनक...
फिल्म लीक गर्नेलाई जेल हाल्नुपर्छ: सलमान
ताजाखबर। बलीउडका सुपरस्टार सलमान खानले भनेका छन् कि फिल्मलाई अनलाइन लीक गर्नेलाई कारबाही हुनुपर्दछ । हालै मात्र 'उड़ता पंजाब', 'ग्रेट ग्राण्ड मस्ती र सलमान खान स्टारर 'सुल्तान' जस्ता फिल्महरु अनलाइन लीक भएका थिए । सलमानले एक अन्तरवार्ताको बेला लीक गर्नेलाई जेल हाल्नुपर्ने बताएका छन् । उनले जब दुईजना जेल जानेछन् तब अन्य आँफैले यस्तो गैरकानुनी काम छोड्ने बताए । उनले करोडौँ लगानी हालेर कठिन...